Inona no hitranga avy any Philippines? Ho an'ny Filipino - 1aviagem.com
Soso-kevitra, resadresaka, tantara notantarain'ny amboara voalohany
Nahoana io anarana io?
Drafitra ny dianao
Currency (Teny notsongaina)
Sokafy ny overlay Widget
Inona no hitranga avy any Philippines? Ho an'ny Filipino
Lahatsoratra teo aloha: izay tokony ho fantatrao momba ny Vakoka
Lahatsoratra manaraka: Ahoana ny fomba hahitana akanjo tsy misy vy
Posted 12 Febroary 2019 ny Rômulo Lucena
Izahay amin'ny fiara fitateram-bahoaka mankany Rosia
Ankehitriny dia hahafantatra bebe kokoa momba ity firenena ity isika - vondronosy antsoina hoe Philippines. Mankao amin'ity resadresaka ity izahay mba hahafantarana misimisy kokoa momba ity firenena ity, izay israelita tsara tarehy any Azia. Ary tsy misy olona tsara kokoa hanambara amintsika kely momba azy noho ny Filipino iray. Izany no mahatonga ahy hiresaka amin'ny namako Filipino androany - Jeff.
Nahita an'i Jeff aho nandritra ny diako voalohany tany Rosia, izay nanitatra tany Polonina. Vondron'olona izay nanao ity dia ity izahay ary lasa mpinamana izahay. Jeff dia tena kamo!
Jeff being Curious
Ary izy koa dia tena mahafinaritra ary manana fahaizana fakan-tsary. Azonao atao ny manamarina azy ireo ao amin'ny bilaoginy ary mahita fa tsy manitatra loatra aho: ny fidirana fotsiny: http://jeffoutsidethebox.com/
Ary eny, na izy, na, mpitoraka blaogy mandritra ny fotoana malalaka (toy ny ezahako atao izao). Izany no ity "fihaonana voalohany amin'ny bilaogera" (avy amin'ny bilaogy voalohany fitsangatsanganana - 1aviagem.com). Fa mpanao dia lavitra izy, mbola mpankafy aho.
Jeff, hatramin'izao, ilay hany Filipino fantatro! Eny, mieritreritra ny hanova izany aho amin'ny fahazoana an'i Filipina, hanampy ireo namana namana Filipino (LOL). Ary antenaiko fa mahafinaritra sy manam-paharetana izy ireo tahaka azy.
Saingy noho izany dia mila fampahalalana fototra momba an'i Filipina aho ary noho izany dia nanontaniako an'i Jeff ny hanao izany tafatafa izany.
Noho izany, andeha isika hiresaka momba an'i Filipina amin'izao fotoana izao.
Tahaka ny mahazatra ao anatin'ity blôgy ity dia hamirapiratra ny tononkira mba hanamora ny mpamaky hamantatra ilay miteny. Hampiasa ny taratasy manga ho an'ny kabariko aho ary i Jeff manana ny taratasy mena.
Izany hoe, aoka isika hanomboka!
1 - Jeff, taiza ianao no teraka? Ary aiza no iainanao ankehitriny?
Teraka tany avaratr'i Filipina aho ary miaina any San Francisco (Etazonia).
2 - Inona ny asanao?
Mpahay siansa momba ny laboratoara aho
3 - Nahoana ianao no nifindra monina tany ivelany?
Eo am-pahatsoram-po, nitady asa bebe kokoa aho.
4 - Inona no tianao momba an'i Philippines?
Ny fitiavantsika. Manana teny fanatanjahantena momba ny fizahan-tany isika: "Mahafinaritra kokoa any Filipina" noho ireo Filipiana. Filipiana dia tena sariaka sy tia mandray vahiny. Tsy manaiky ve ianao?!
Eny, manaiky tanteraka! hahaha. LOL
5 - inona no azonao ovaina any, raha azonao atao?
Tiako ny Filipina, saingy misy zavatra maro tsy tiako. Ny zavatra voalohany dia ilay antso "Time of Filipino" - Midika izany fa tonga minitra na ora vitsivitsy raha oharina amin'ny fotoana voatondro. Ny faharoa dia ny fampiharana ny lalàna. Ny iray hafa dia ny fananganana drafitra mahatsiravina. Ny iray hafa dia tsy fahampian'ny famaizana, ny kolikoly, ny tsy fahampian'ny rafi-pitsarana sy ny sisa. Raha afaka manova ny ankamaroan-dry zareo aho ... azoko sary an-tsaina hoe hatraiza no halehanay.
6- Fantatro fa manana fahatsiarovana tsara ho an'ny hira ianao, kolontsaina, sa fotsiny ve i Zefania? (Miteny izany aho satria nandritra ny diany dia nandrava an'i Karaoke izy).
Heveriko fa kolontsaina izany. Ny ankamaroan'ny Filipiana dia tia mihira (eny fa na dia tsy misy feo aza ianao!) Euphemisme izany dia milaza fa tia karaoke. Saika ny trano rehetra any Filipina dia manana milina karaoky na mikraoba mihira. Ny fankalazana manontolo amin'ny fety ao amin'ny birao, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny fampakaram-bady dia manana karaoke. Izany no fialambolam-pirenena. Tsy maninona raha tsara ianao na tsia, mihira fotsiny! Izany no izy.
7 - Ary marina ve fa ny Filipina dia manana nosy mihoatra ny 7.000? Ary inona ny fiteny ofisialy?
Ny nosy 7.641 no marina! Manontany tena aho hoe haharitra hafiriana ny isa misy amin'izao fotoana izao noho ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny mari-panan'ny tany. Ka eny, afaka manana mihoatra noho ireo nosy 20 isan'andro ianao hijery any Philippines!
Filipino no fiteny ofisialy, saingy ny ankamaroan'ireo Filipiana dia miteny anglisy.
8 - inona no soso-kevitrao ho an'ny mpizahatany mba hanaovana na hitsidika an'i Filipina amin'ny diany voalohany?
Lazainay foana ny mandeha any Boracay. Nosy tsara tarehy misy loko fotsy izy, manodidina ny 170 miles atsimon'ny renivohitra, Manila. Voarakitra vao haingana noho ny tondra-drano nateraky ny fizahan-tany tsy tompon'andraikitra. Ankehitriny taorian'ny enimbolana enim-bolana dia naverina indray izany. Ary tsy afaka miandry ny hitsidika ity paradisa ity koa aho. Tsy mila mamolavola ny dia ianao, satria be dia be ny mandeha any. Safidy hafa dia an'i Palawan na Cebu. Tonga any Philippines ny mpizaha tany noho ny tora-pasika tsy voapanga.
Jeff any Boracay avy amin'ny (http://jeffoutsidethebox.com/)
9 - Ary ahoana ny momba ny blôginao, moa ve ianao mikasa ny hanohy?
Tiako ny, fa tsy mavitrika loatra aho hanoratra. Angamba handefa lahatsoratra sy hanoratra amin'ny media sosialy toy ny Instagram, izay mora atao.
10- firy firy no nitsidika anao?
Eny, tsy azoko ny isa ... fa azoko antoka fa teo amin'ny 50 izy ireo.
Wow, iriko, azoko azoko atao amin'ity isa ity ihany koa. LOL. Haha hanao ny tsara indrindra hahaha aho. 😎
11- Jeff, ary nahoana ianao no mandeha lavitra be?
Te handeha foana aho. Raha ny hevitro, tsy afaka mametraka vidiny amin'ny fahatsiarovana azonao rehefa mandeha. Ny hafa dia misafidy ny fiainana miaraka amin'ny fananana, saingy nisafidy fiainana niaina aho. Tsy afaka maminavina izay hitranga amin'ny hoavy isika ary tsy miaina ny efa ho telopolo taona, na dimampolo na enim-polo taona, dia tsy hanenina. Koa mifandray amin'izao tontolo izao aho ary feno izany.
Oh, izany dia fomba tsara eritreretina!
Jeff, antenaiko fa hitazona anao ity angovo tsara ity manerana an'izao tontolo izao. Mino anay rehetra aho rehefa mifandray amin'ny olona, ​​raha afaka manentana na manampy ity olona ity, dia fomba tsara hanovana an'izao tontolo izao izany.
Ary izao tontolo izao dia mila olona maro izay miaina mba hanana traikefa fa tsy miaina mba hanana zavatra ara-nofo sy fananana.
Ary eto izahay dia hamarana ity tafatafa ity. Misaotra an'i Jeff, mila an'i Jeffs hahaha bebe kokoa izao tontolo izao.
Misaotra ny fanadihadiana, tena mahafinaritra tokoa izany.
Ho an'ny fanadihadiana misimisy kokoa, toro-hevitra sy tantara toy ity, tsindrio ny sari-taninay kely eto ambany.
Ary toy ny tendron'ny farany ho an'ny tantsambo voalohany any Filipina izay handehanako dia avelako ilay rohy livelika izay mora sy mora ny manomana fitsangatsanganana an-tserasera.
Fanamarihana, azonao atao ny manova ny fiteny amin'ny tsindrio ny sainam-pirenena.
Raha tianao izany, tsindrio ny bokotra etsy ambany. Na avelao ny hevitrao, zarao ary ampio izahay hilalao izao tontolo izao. 😉
AFRIKA AZIA EUROPE AVARATRA AMERIKA OSEANIA ATSIMO AMERIKA
Tsindrio ny hizara amin'ny Twitter (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny Facebook (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny WhatsApp (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny Pinterest (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny Reddit (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny LinkedIn (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny Pocket (Mivoha amin'ny varavarankely vaovao)
Tsindrio ny hizara ny telegrama (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny hizara amin'ny Tumblr (manokatra in new varavarankely)
Tsindrio ny e-mail amin ny namana (manokatra in new varavarankely)
mankafy Loading ...
Rômulo Lucena	Hijery ny rehetra →
Mizarà traikefa amin'ny fizahan-tany, mitondrà kolotsaina sy tantara mba ahafahanao mampandeha ny fandehananao milamina kokoa.
Manao ny dia voalohany izahay ary miaraka aminao.
Miantehitra amin'ny blôgy amin'ny mailaka
Ampidiro ny adiresy mailakao mba hisoratra anarana amin'ity blôgy ity ary handefa vaovao amin'ny famoahana vaovao amin'ny alàlan'ny mailaka.
Miaraha 136 mpanjifa hafa
Tema: mpandalo Pro Design Design
Miverina any ambony
Nakatona ny Widget mihidy
Tohizo izany Facebook
Tohizo izany Google
Firy ny sakaosy hitanao amin'ny sary? Taorian'ny zava-mampalahelo nahazo ny fandroana tao amin'ny iray tamin'izy ireo, dia toa toa feno koa izy io ary naverina natao hamerina indray. #sextou #dajanela @dftv ​​#expedicaoglobodajanela #catos
Mifindra hanome izany fanerena kely izany ho an'izay maniry ny #travel ary mihoatra ny # COVID-19. #borala miditra ao 1aviagem.com (rohy ao amin'ny bio) #uruguay 🇺🇾 #montevideo #pontosturisticos #rambla #mujica #1aviagem #bolivar #artigas
Mamelà ahy ary ampio aho hahafantatra an'izao tontolo izao (tsy mandany vola izany)
Nitsidika ny Firenena Mikambana 34 (17.61%) aho tamin'ny totalin'ny 193.
mailaka tsy hamela lahatsoratra vaovao.
Ampidiro ny adiresy emailo hanaraka ity blog ity
Jereo ny mailakao ary valio
Alefaso ny oendereço mailaka Ny anaranao Ny e-mail hanafoana
Email maso nahomby, andramo indray
%d tahaka izao ny mpamaham-bolongana: